Wuhan Pixel Box Cinema Ny Sinema - Famolavolana
Ny Sinema Ny "Pixel" no singa fototra amin'ny sary, ny mpanaingo dia mandinika ny fifandraisan'ny hetsika sy ny piksel ho tonga lohahevitr'io famolavolana io. Ny "Pixel" dia ampiharina amin'ny faritra samihafa amin'ny sinema. Ny efitrano fivoaran'ny boaty dia mametraka valopy mirehitra lehibe vita amin'ny takelaka vy matevina 6000 mahery. Ny rindrina fampisehoana fampisehoana dia voaravaka amin'ny habetsaky ny kianja mitafo avy amin'ny rindrina manolotra ny mahavariana amin'ny cinema. Ao anatin'ity sinema ity dia samy mankafy ny rivo-piainana eran'izao tontolo izao nomerika ateraky ny firaisan'ny singa rehetra "Pixel" ny rehetra.
Anaran'ny tetikasa : Wuhan Pixel Box Cinema, Anaran'ny mpamorona : One Plus Partnership Limited, Anaran'ny mpanjifa : Hubei Xiang Sheng & Insun Entertainment Co. Ltd..
Ny Sinema One Plus Partnership Limited Wuhan Pixel Box Cinema